मुगुका सहकारीकर्मी भुपेन्द्रबहादुर मल्ल भन्छन्– सहकारीलाई डिजिटल प्रबिधिमा रुपान्तरण गर्दैछौं सहकारी संवाद
काठमाडौं । मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१ का ३१ बर्षिय भुपेन्द्रबहादुर मल्लले कलिलो उमेरमै सहकारी स्थापनागरि उचाईमा पुर्याउन सफल भएका छन् ।
मानव संशाधन ब्यवस्थापनतर्फ एम बि ए गरिसकेका उद्यमशील कर्मनिष्ट मल्लले छायाँनाथ बचत तथा ऋण सहकारी स्थापनागरि दुरदराज बस्तिका गरिव बिपन्न दलित र महिलालाई आयआर्जनको लागि ऋण परिचालन तथा लघुबित्त बचत गरि जिल्ला भरिकै उत्कृष्ट एबम नमुनासहकारी बनाउन सफल भएका छन् ।
उनै मल्लसँग मुगु संसार न्यूजसंवाददाताले गरेको कुराकानी ।
कतिबर्ष पुग्यो सहकारी स्थापना गरेको ?
६ बर्ष जति भयो यो सहकारी स्थापना गरेको ।
सहकारीको अबस्था अहिले कस्तो छ त ?
अहिले रामै्र अघि बढि रहेको छ । सहकारी स्थापना अबधिमा ७ लाख पुँजी थियो भने अहिले २६ करोड पुगिसकेको छ । यो अबस्था हेर्दा सहकारीको उचाई निकै बढेको हो भन्न सकिन्छ । सहकारी स्थापना गर्दा कतै डुब्ने हो कि भन्ने डर थियो भने अहिले निकै उत्साह र हौसला जागेको छ ।
सहकारी स्थापना गर्नुको मुख्य उदेश्य के हो ?
हामीले ठूलो उद्धेश्यका साथ यो सहकारी स्थापना गरेका हौं । मुनाफा कमाउनेभन्दा पनि बिकट दूरदराज बस्तीमा रहेका गरिव बिपन्न दलित समुदायमा विशेष गरी अबसर नपाएका महिलालाई उद्यमशील बनाउने उनीहरुलाई ऋण लगानी गरेर आर्थिक सबलीकरणमा माथि उठाउने आर्थिक रुपमा बलियो बनाउने तथा माग्ने प्रबृतिको अन्त्य गर्ने प्रमुख लक्ष्य हो । अर्कातिर गाउँबस्तीमा महिलाहरुले पैसा चलाउन पाउन् । महिलाले आफूले इच्छाएको समान किन्न सकुन् । अप्ठेरो मान्दै श्रीमानसँग पैसा माग्नु नपरोस् । बचत उठाउन सकुन् । ऋण लिएर व्यापार गरुन् भन्ने उद्धेश्य पनि हो ।
यो सहकारीका शाखा उपशाखा र कर्मचारी कति छन् ?
हाम्रो सहकारीमा ९ वटा बिभाग, ३ वटा शाखा र ४२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । छोटो समयमा यत्रो प्रगति नै हाम्रो गौरव हो भन्ने लाग्छ । सहकारीले अनुदानमा एम्बुलेन्स पाएको छ । उक्त एम्बुलेन्स संचालन कार्यबिधि बनाएर सडकको पहुँच पुगेका बस्तीबाट बिरामी, तथा गर्भवती महिलालाई सेवादिने काम गरेका छौ ।
यो अबधिसम्म सहकारीको बार्षिक नाफा र लगानी कति छ ?
महिनामा ९० लाख उठ्ने गरेको छ । भने बर्षमा ६ करोड अर्थात् लगानी हुने गरेको छ । मासिक आम्दानी १४ लाखजति छ । सहकारी स्थापना गरेको छोटो अबधिभित्र यत्रो रकमको कारोबार गर्नु पाउँदा खुशी नै छौ । यसमा कर्मचारीको पनि ठूलो मेहेनत परिश्रम छ । कर्मचारी राम्रा भए भने संस्था राम्रो हुने हो ।
सहकारीले केमा प्राथमिकता दिएर ऋण लगानी गर्ने गरेको छ ?
यो सहकारीको लगानीको प्रमुख उदेश्य भनेकै कृषि क्षेत्र हो । मुगुमा रोजगार भन्दा बढी कृषिमा आत्मनिर्भर भएको हुँदा उनीहरुलाई माथि उकास्न बाख्रापालन, भैसीपालन, होटल, पसल, ब्यबसाय, खच्चर पालन, सिलाई कटाई संचालन लगायतमा सहकारीले प्रमुख प्राथमिकता दिएर ऋण लगानी गर्दै आएको छ ।
अर्कोतिर पुरुषभन्दा ८० प्रतिशत महिलालाई ब्याबसाय संचालनको निम्ति ऋण लगानी गर्ने गरेका छौ । यहाँका महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा शसक्त बनाउन सहकारी अघि बढेको छ । सहकारीले महिला सचेतिकरण कार्यक्रमहरु पनि अघि बढाएको छ ।
सहकारीले ब्याज चर्को लिन्छ भन्ने सुनिन्छ नि !
सहकारीले आफ्नै मनोमानी हिसावले ब्याज लिने गरेको छैन सहकारी बिभागले जारी गरेको नियम र परिधिभित्र रही ब्याज लिने नियम छ ।
यो सहकारीप्रति स्थानीय कति आकर्षित देखिएका छन् ?
स्थानीयलाई सहकारी बारे प्रष्ट बुझाउन जरुरी छ । सहकारीप्रति अझै ज्ञान छैन । समुदायमा सहकारी बारे ब्यापक जागरण ल्याउने कामलाई निरन्तरता दिएका छौ । पछिल्लोपटक समुदायस्तरमा सहकारी प्रति धेरै चासो देखा परेको छ । महिला पुरुष आफै कार्यालयमा आएर सहकारी बारे जानकारी लिन थालेका छन् । एकबर्षमा ७ सय ११ सदस्य बन्नु नै सहकारीप्रति समुदाय जागरुक भएका छन् भन्न सकिन्छ ।
ऋण असुली गर्न कत्तिको सजिलो छ त ?
सहकारीबाट स्थानीयले ऋण लिएर सफल ब्याबसाय उद्यम संचालन गरे भने ऋण असुली गर्न मश्किल छैन । उनीहरु आफै कार्यालयमा आएर मासिक किस्ता तिर्दै पनि आएका छन् । तर, सहकारीबाट ऋण लिएर ब्याबसाय संचालन गरि घर जग्गा किन्न निजी खर्चमा पैसा मास्ने त्यस्ता ब्यक्तिबाट ऋण असुलीगर्न गाह्रो हुने गरेको छ । म के भन्छु भने कुनै पनि ब्यक्तिले बिना उदेश्य र लक्ष्यबीना सहकारीबाट ऋण लिनु हुदैन । योजना बनाएर ऋण लियो भने त्यो ब्यक्तिले छिटै प्रगति गर्नु सक्छ ।
यो सहकारीले गरेका राम्रा काम के के हुन् ?
दुरदराजको गाउँबस्तीको चुलो चौको घरधन्दा खेतीपातीमा ब्यस्त देखिएका महिला दिदीबहिनीलाई बित्तिय क्षेत्रमा समाबेश गर्न सफल भयौ । यो नै सहकारीको उत्तम काम हो भन्ने लाग्छ ।
सहकारीले अहिले सम्म कहाँ र कति सहयोग पाएको छ ?
युवा परिषदबाट ३० लाख र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट ५० लाख सहयोग पाउन सफल भएको छ । आर्थिक सहयोग त एकातिर छदैछ । अर्कोतिर गरिव, दलित, बिपन्न र महिलाहरु हाम्रो सहकारीतर्फ आकर्षित हुनु नै त्यो पनि सहयोग ठानेका छौ ।
सहकारीले कुनै निकायबाट सम्मान पाएको छ त ?
यो सहकारी संस्था देशभरिका लघुबित्त सेवाप्रदायकबाट सर्बोत्कृष्ट भयो २०६४ सालमा धेरै कर दाखिला गर्न सफल भयौ यही नै सम्मान हो ।
यो सहकारीका लघुबित्त केन्द्र कतिवटा छन् ?
मुगुका चारवटै स्थानीयतहमा यो सहकारीका करिव ३ सय १२ वटा लघुबित्त छन् । तिनीहरु प्रत्येक घरदैलो बस्ती स्तरमा पुगेर बचत संकलन गर्ने काममा अग्रसर देखिएका छन् । यो सहकारीका करिव ६ हजार शेयर सदस्य छन् ।
यो सहकारीलाई भबिष्यमा कस्तो बनाउने सोच राख्नु भएको छ ?
कर्णाली प्रदेशभरि यो सहकारीको कार्य क्षेत्र बिस्तार गर्ने हाम्रो मुख्य उद्धेश्य छ । अर्कोतिर सहकारीलाई डिजिटल प्रबिधिमा छिटै रुपान्तरण गर्ने सोच राखेका छौ । अनि ब्याजको रुपमा खाद्य बस्तु उठाएर भोकभरी तथा बिपत्तिमा सहयोग गर्ने लक्ष्य पनि राखेका छौ ।
भबिष्यमा यो सहकारीलाई कस्तो बनाउने लक्ष्य राख्नु भएको छ ?
यो सहकारीलाई सदस्य केन्द्रीय र स्थानीय उत्पादन बजारीकरण र प्रतिस्पर्धी बनाउने सोच छ । कामगर्ने क्रममा कहिलेकाँही लक्ष्यपनि सफल नहुन नसक्छन् । भगवानले ‘त आँट म पु¥याउला’ भन्छन् ।
यो सहकारीमा तपाई कहिलेसम्म रहनु हुन्छ ?
यो सहकारीमा म आजिवन सम्म रहन्छु । किनभने मेरो अध्यायन पनि यही क्षेत्रमा भएकोले सहकारी छोडेर अन्त कतै जानु छैन । दातृ निकाय तथा अन्य क्षेत्रसँग समन्वय सहकार्य गर्दै अबको केहीबर्ष भित्र यो सहकारीलाई अझ उचाईमा पु¥याउने सोँच छ । यसमा ठूलो हात सहकारीमा आवद्ध कर्मचारीको हुन्छ ।
अहिलेको परिबेशमा राजनीतिक हिसावले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टीकोण कस्तो देख्नु भएको छ ?
हाम्रो नेपालमा नेताले सहकारी खोल्ने चलाउने गरेको पाइन्छ त्यो राम्रो होइन । सहकारीका हरेक नीति निर्माणसित जोडिएको ब्यक्ति हुनु पर्छ । राजनीतिक हिसावले परिचालित सहकारीको भबिष्य पनि राम्रो हुदैन । कर्मनिष्ट र ब्यक्तिले मात्र सहकारी हाक्न सक्छ । मुगुकै सन्र्दभमा २४ वटा बचत तथा ऋण सहकारी र करिव ३ सय भन्दा बढी अन्य सहकारी खोलिएका छन् । तिनी सहकारी भन्दा हाम्रो छायाँनाथ सहकारी धेरै फरक छ । अधिकांस झोले सहकारी पनि छन् । पहिलो तामझामका साथ सहकारी खोल्ने ५ बर्ष नपुग्दै बन्द हुने सहकारी खोलेर के अर्थ ।
तपाईले यो सहकारी कामगरि रहदा रमाइलो पक्ष के ?
गरिब समुदायका महिला, पुरुष तथा दलित वर्गलाई आयआर्जनको लागि ऋण परिचालन गर्नु र उनीहरुले यो सहकारीलाई देउता सम्झीनु मेरो लागि त्यही नै रमाइलो पक्ष हो । अर्कोतिर दुरदराजका महिला पुरुषसित मेरो सहकारी र मेरो नाम जोडिएको र तिनीहरुले चिन्न मौका पाएका छन त्यो पनि मेरो निम्ति रमाइलो क्षण हो ।
सहकारी स्थापना गरेको करिव ६ बर्ष पुगि सकेको छ यसमा समस्या के–के छन् ?
सहकारी स्वतन्त्र छ । प्रबिधिको प्रयोग गर्न सकेका छैनौ । भौगोलिक बिकटताले गर्दा पनि काममा बाधा पु¥याएको महसुुस भएको छ । यहाँ कामको मुल्यांकन गरिदैन । कतिपय सहकारीले भनसुनको भरमा अनुदान ल्याउने गरेका छन् त्यस्तो हुनु हुदैन ।
कोरोना महामारीको बेला यो सहकारीले के कस्ता काम गरेको छ ?
बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीलाई लक्षितगरि यो सहकारी संस्थाले हर्जना छुट, पूर्नकर्जा लागु तथा चारवटा स्थानीयतहलाई पचास–पचास हजार आर्थिक सहयोग गरेका छौ । सबै सदस्यलाई कोरोना बिमा गरेका छौ । अनि समुदायमा कोरोना सचेतिकरण प्रचार पम्पलेट पनिबितरण गरेका छौ ।
अन्तमा तपाई सहकारीमा अध्यक्ष भई सकेपछि कुन–कुन देशमा भ्रमण गर्नु भएको छ ?
म यो अवधिमा भारत, सिंगापूर, अष्टेलिया, सार्कस्तरिय सहकारी गोष्टी तथा एशियास्तरीय सहकारी गोष्टी तथा तालिममा सहभागीहुने मौका पाएको छु ।
प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुराको मुद्दालाई कमजोर पारे
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था रअका…